Allbenaadir » Bandhigii De Gea, Qaladaadkii Daafac Ee Arsenal & Shan Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Man United Xalay Kaga Badisay Arsenal Garoonka Emirates
Bandhigii De Gea, Qaladaadkii Daafac Ee Arsenal & Shan Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Man United Xalay Kaga Badisay Arsenal Garoonka Emirates
December 3, 2017 - Written by admin - Edited byadmin
1. Lingard oo aamusiyay jamaahiirta United
Waxa uu inta badan ahaa xiddiga Manchester United ee kursiga keydka loo dhaadhiciyo, laakiin Jesse Lingard ayaa banaanka soo dhigay howsha uu u qaban karo kooxdiisa.
Kulankii Emirates waxa uu ahaa kulankiisii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan, waxaana uu qiil u helay in tababare Mourinho uu soo xusho kulan sidaan u weyn.
Qaar ka mid ah taageerayaasha Manchester United ayaa caradooda soo bandhigay markii Lingard lagu soo bilaabay kulankii Watford ee isbuucii la soo dhaafay, laakiin si wacan uu u dheelay ayaa keentay inuu booskiisa sii xajisto kulankii ay xalay booqdeen Arsenal.
Waa ay adkaan doontaa in kursiga keydka la geliyo kulanka Manchester Derby ee isbuuca soo socda ka dib sida fantastiga aheyd ee uu u dheelay kulankii adkaa ee xalay.
Labo gool oo dhaliyay xalay iyo goolkii bartamaha isbuuca uu dhaliyay ayaa ka dhigeysa in Lingard uu ugu yaraan kulanka Manchester Derby u qalmo in lagu soo bilaabo booska No.10
2. Pogba oo neef ka fujiyay City ka hor kulanka isbuuca danbe
Paul Pogba ayaa qaatay casaan toos ah ka dib markii uu cagta meel halis ah uga qabtay Hector Bellerin.
Ilaa iyo waqtigaas waxa uu xiddiga reer France ku riyaaqayay ciyaar fiican isagoo caawiye ka ahaa goolkii labaad ee Jesse Lingard ahaana goolkii seddexaad ee Manchester United.
Markii casaanka la siiyay oo uu ka sii baxayay garoonka Pogba ayaa la arkay isagoo u sacbinaya garsooraha taasoo keeni karta inuu ganaax dheeraad ah la kulmo. Casaankiisa waxba kama bedelin natiijada ciyaarta laakiin waxa ay niyadjab weyn ku tahay United oo weyneysa xiddigeeda ugu qaalisan seddexda kulan ee soo socota.
Xiddiga United ayaa seegi doona kulanka Manchester Derby ee isbuuca danbe iyo kulamada kale ee Premier League ee Bournemouth iyo West Brom
3. habeen xun ayay u aheyd daafacyada Arsenal
Laurent Koscielny waxa uu ka mid yahay daafacyada ugu fiican Premier League, laakiin xalayto ma aheyn habenkiisa waxaana uu ku dhibtoonayay inuu go’aano sax ah qaato, si la mid ah xiddiga ka garab ciyaarayay Shkodran Mustafi iyadoo labada daafac ay qaladaad ku lahaayeen goolashii ay dhalisay Manchester United.
Inkastoo uu weerarka Man United ahaa dhif iyo naadir hadana waxa ay ku guuleysteen inay daafacyadaan ka soo bixiyaan boosaskooda taasoo ka dhigtay inay seddex jeer shabaqa ka soo taabtaan goolhaye Petr Cech.
4. Bandhigii De Gea oo soo jiitay indhaha caalamka
Manchester United guul muhim u aheyd waa ay ka gaartay Arsenal xalayto, laakiin waxa abaal weyn uga hayaan goolhaye David de Gea kaasoo badbaadiyay 14 fursadood islamarkaana ka dhigay taageerayaasha labada kooxood kuwa afka kala haya oo la yaaban qaab ciyaareedka cajiibka ah ee uu soo bandhigayo goolhayaha reer Spain.
Qeybtii labaad waxa uu labo fursadood oo dahabi ah oo isku xiga uu ka beeniyay Lacazette iyo Alexis Sanchez, waxaana ay badbaadintaas u dhigantaa sida gool laga soo dhaliyay bartanka garoonka oo kale. De Gea ayaa xalay u diiday Arsenal dhibcaha, guusha United-na ma noqoteen mid suuragasha isaga la’aantiis.
5. Jamaahiirta Arsenal oo dareemaya dareen ay u barteen
Jawiga garoonka Emirates oo inta badan la dhaleeceynayay ayaa xalayto ahaa mid kacsan oo xamaasadeysan.
Waxa ay kooxdooda garab istaageen iyagoo labo gool lagu hogaaminayo, waxaana ay ka caawiyeen inay ciyaarta dib ugu soo laabtaan. Nasiibdarro ayayse ku aheyd jamaahiirta Arsenal in jawigii fiicnaa ay abuureen inaysan kooxdooda ku hogaaminin guul cajiib ah. Kulan kale oo ay la ciyaareen lixda kooxood ee ugu sareysa iyo guuldarro kale, waana dareen ay u barteen.